Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba ze-UK Breaking » I-COVID-19 furlough iphela ngesikhathi esibi kakhulu kwezokuvakasha e-UK
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Transportation • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • Izindaba ze-UK Breaking
Ukuphela kwe-COVID-19 furlough kuza ngesikhathi esibi kakhulu kwezokuvakasha e-UK
Abahlaziyi bezimboni babikezela ukuvakasha kwasekhaya e-UK ukubuyela emuva kumazinga we-2019 phakathi kwe-2022, lapho izofinyelela kuhambo oluyizigidi eziyi-123.9. Kodwa-ke, uhambo oluphuma emazweni omhlaba luzothatha isikhathi eside futhi ngeke lubuyele kumazinga wangaphambi kwe-COVID kuze kube ngu-2024, lapho bezoshaya khona uhambo oluyizigidi ezingama-84.7.
Ukuphela kwe-furlough bekungeke kufike ngesikhathi esibi kakhulu sonyaka embonini yezokuvakasha yase-UK.
Yize ukululama kwasekhaya kwase-UK kusendleleni yokubuyela emuva ngo-2022, imboni kufanele iqale kuqala isikhathi esinzima sobusika kuqala.
Ukuthola ibhalansi kuzodala ukuphathwa ikhanda kumafemu amaningi okuhamba - ikakhulukazi lawo ancike kakhulu ekuhambeni kwamanye amazwe.
Njengoba uhlelo lwe-UK lwe-furlough luzophela kule nyanga, izinkampani zezokuvakasha zizophoqeleka ukuthi zinciphise izindleko ukuze zisinde ebusika. Ochwepheshe bemboni yezokuvakasha nezokuvakasha baxwayisa ngokuthi lezo zinyathelo zingabandakanya nokudilizwa kwabasebenzi.
Ukuphela kwe-furlough bekungeke kufike ngempela ku- isikhathi esibi kakhulu sonyaka embonini yezokuvakasha yase-UK. Isikhathi esinzima sasebusika sesifikile kithi, futhi izindlela zokunciphisa izindleko zizobaluleka ekusindeni. Ngeshwa, lokhu kusho ukuthi ukuncishiswa kungenzeka, njengoba lena kungenye yezindlela ezilula zokonga imali.
Abahlaziyi bezimboni babikezela UK ukuvakasha kwasekhaya ukubuyela emazingeni e-2019 phakathi kuka-2022, lapho izofinyelela kuhambo oluyizigidi eziyi-123.9. Noma kunjalo, International Ukuhamba okuphumayo kuzothatha isikhathi eside futhi ngeke kubuyele kumazinga wangaphambi kwe-COVID kuze kube ngu-2024, lapho bezoshaya khona uhambo oluyizigidi ezingama-84.7.
Yize ukululama kwasekhaya kusendleleni yokubuyela emuva ngo-2022, imboni kufanele iqale kuqala isikhathi esinzima sobusika kuqala. Ngaphandle kwesidingo esanele, imali engenayo izoqhubeka nokucindezelwa futhi izinkampani zizodonsa kanzima. Kufanele kusalwe ibhalansi enhle phakathi kokudilizwa kanye nokushesha kwesikhathi esizayo.
Ochwepheshe bemboni baphinde baveze ubungozi bokushiya izinombolo zabasebenzi ezinkampanini zokuhamba zase-UK, Uma izinkampani ziqala ukwenza abasebenzi bangasasebenzi, abakwazi ukuphendula ukuphakama okungazelelwe okufunwayo. Ukuthola ibhalansi kuzodala ukuphathwa ikhanda kumafemu amaningi okuhamba - ikakhulukazi lawo ancike kakhulu ekuhambeni kwamanye amazwe. Isimo esishintsha masinyane semikhawulo yezokuvakasha singabona ukuphakama okungazelelwe kudinga izindawo ezithile ngesaziso esifushane. Uma inkampani isebenza kancane, ingaphuthelwa yimali edingeka kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, ukugcina abasebenzi abaningi kakhulu kungaholela ezindlekweni ezingalawuleki.
Ukunweba isikimu se-furlough somkhakha wezokuvakasha kungathenga isikhathi somkhakha kuze kube yilapho isidingo siqala ukuqiniswa. Kodwa-ke, ithemba lincane.
Umfowethu omusha ophilile wase-Emirates eNingizimu Afrika ubizwa ...
Ukuzamazama Komhlaba Okunamandla Kushaye Iziqhingi Zesandwich South ...
Amacala e-COVID aphakeme kunawo wonke futhi ayakhuphuka eHawaii Ngenkathi ...
Ukuvuselelwa kwemboni: IMEX America ibuyisa ...
Ukuqhuma kwesibili kubikwe esikhumulweni sezindiza iKabul ngemuva kuka-13 ...